Soo Degida Barnaamijka softiweerka ee ka yimid Formstack
Formstack oo Daahfuray Bogag soo degitaan
Talaado, Maarso 29, 2011 Isniin, Janaayo 1, 2018 Douglas Karr
Bravo asxaabteyda wanaagsan ee Qalabaynta - sidaan qabo - ra'iisul wasaaraha dhismaha foomka internetka loogu talagalay suuqleyda (haa, taasi waa xiriir xiriiriye ah). Mid ka mid ah howlaha adag ee aan la leenahay macaamiisheenna marka aan dhiseyno istiraatiijiyad deg deg ah ayaa runtii ah kaabayaasha lagu dhisayo bogagga degitaanka gudaha.
Dhibaato maahan dambe! Qalabaynta ayaa hadda soosaartay xalkeeda Degista Bogga si loo dhiso bogag hareerahaaga ah Qalabaynta foomamka.
Haddii aad fulineyso istiraatiijiyad suuqgeyn gudaha ah, waxay umuuqataa inaysan jirin qalab ka fiican kan Qalabaynta si loo dhiso loona abaabulo bogagga degitaankaaga. Waad soo rogi kartaa mid ka mid ah olole kasta oo leh dadaal aad u yar!
Tags: foomamkaxirmoboggaga soo degaya
Ganacsatada Ma Dhasheen?
Falanqeyn: Google Analytics Nooca 5
Mar 29, 2011 at 10: 23 PM
Bogagga degitaanka cusubi ma u shaqeyn karaan PPC? Maxay yihiin xadidaada URL-ka?
Mar 31, 2011 at 8: 16 PM
Chris wixii aan ku arkay waa inaad isticmaashaa url daboolan si aad u hesho bogga oo aad u muujiso sidaad jeceshahay. Waan hubaa inay tani isbeddelayso waqti kadib